Bahrain: Bilaogera malaza voasazy higadra 15 taona an-tranomaizina miaraka amin’ireo mpiaro ny zon’olombelona hafa · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Bilaogera malaza voasazy higadra 15 taona an-tranomaizina miaraka amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona hafa
Voadika ny 05 Marsa 2019 4:22 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jiona 2011)
Ali Abdulemam sy ny zanany roa
Sivy volana taorian'ny nisamborana an'i Ali Abdulemam, bilaogera malaza sady mpikatroky ny zon'olombelona, sy ireo mpikatroky ny zon'olombelona sy ny zo ara-politika tany Bahrain, dia nanameloka azy higadra 15 taona an-tranomaizina ny fitsarana miaramila. Ny sisa tamin'ireo mpikatroka kosa nahazo sazy isankarazany manomboka amin'ny sazy roa taona an-tranomaiozina ka hatramin'ny migadra mandra-pahafaty, ao anatin'ny famoretana hamotipotehana tanteraka ireo feo fanoherana nanomboka tamin'ny volana Septambra izany rehetra izany. Nomelohin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona toy ny Reporters Sans Frontières sy ny Amnesty International avy hatrany ny didim-pitsarana.
Malcolm Smart, talen'ny Fandaharan'asan'ny Amnesty International Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, mitatitra hoe:
“Toa misy ambadika politika ny fitsarana, satria tsy nahita porofo izahay fa nampiasa na nandrisika ny herisetra ireo mpikatroka”.
Nitatitra koa ny AI fa olona 500 farafahakeliny no nogadraina tao Bahrain hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panohanana fanavaozana tamin'ny volana febroary, efatra no maty tamin'ny toe-javatra mampiahiahy tamin'ny fanagadrana azy ireo ary efa ho 2 000 ny olona tsy hita na naato tamin'ny asany. Tonga hatramin'ny fitifirana ireo mpanao fihetsiketsehana milamina sy ny fanagadrana ireo mpanampy mpitsabo sy dokotera mitsabo azy ireo ny famoretana atao amin'ny mpanohitra.
Nosaziana tamin'ny fitsarana tsy natrehany i Ali Abdulemam, izay manan-janaka telo. Fantatra ho “rain'ny mpibilaogy” izy taorian'ny taona maro naha-bilagoera sy mpikatroka ny zon'olombelona azy, ​​indrindra tamin'ny alàlan'ny vavahadin-tseraserany BahrainOnline.org, iray amin'ireo fampahalalam-baovao prô-demaokrasia malaza indrindra ao amin'ny Fanjakana. Noho ny asany lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fanavaozana demaokratika sy ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny faritra amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana nomerika, dia niteraka fanentanana eran-tany nandritra ny fdidy fisamborana azy voalohany tamin'ny taona 2005. Niteraka fanohanana sy firaisankina marobe ny fisamborana azy tamin'ny volana Septambra, ka nitaky ny famotsorana azy sy ny famotsorana ireo mpikatroka hafa ny bilaogera manerana izao tontolo izao. Manana mpikambana maherin'ny 2.600 ny vondrona Facebook-ny ary mitombo haingana izany amin'ny alalan'ny resabe (buzz) ataon'ireo mpiserasera marobe ao amin'ny twitter.
Shadaio @Drdoos_BPR @abdulemam Tokony hirehareha ianao fa afaka manova zavatra ny teninao. Tohizo
maryamalkhawaja tsy tonga tamin'ny fitsarana (in absentia): Ali AbdulEmam: 15 taona an-tranomaizina, fantatra amin'ny maha rain'ny mpibilaogy. #bahrain #jun1
Fotoana fohy taorian'ny namotsorana azy tamin'ny 23 Febroary, dia mbola nanjavona indray i Abdulemam, ka tsy misy mahafantatra ny toerana misy azy na ny fianakaviany na ireo namana akaiky azy.
Manohy tsy miraharaha ny fanerena ataon'ny iraisam-pirenena i Bahrain, ka niteraka ny fanafoanana ny fifaninana malaza Formula 1 Grand Prix ao Barhain amin'ny taona 2011, rehefa samy nanohitra ny datin'ny fifaninanana ny ekipan'ny F1 noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena.
Fikambanana mpandala ny zon'olombelona, Front Line Defenders mitatitra hoe:
Manasongadina ny fahavonan'ny governemantan'i Bahrain hiaro mafy ny fanasaziana amin'ny fomba rehetra ny didim-pitsarana sy ny zava-misy nanaovana tribonaly miaramila azy, izay tsy manaja ny fenitra iraisam-pirenena nekena momba ny fizotry ny raharaham-pitsarana ara-drariny.
Miantso ny manampahefana ao Bahrain ny Amnesty International mba hamarana ireo tribonaly miaramila tsy ara-drariny ary hamotsotra tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra an'ireo gadra rehetra noho ny fanehoan-kevitra.